Logitech's Folio Touch, klavie misy trackpad ho an'ny iPad Pro 11-inch, misy izao | Vaovao IPhone
Rehefa nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny Magic Keyboard vaovao tamin'ny alàlan'ny trackpad i Apple, dia nanambara ny orinasa Logitech fa miasa amin'ny a kinova mora kokoa amin'ity Magic Keyboard ity Apple, kinova izay mifanaraka amin'ny maodely natomboka tamin'ny taona 2018 ihany koa.
Ity fitendry vaovao ity dia efa ofisialy ary antsoina hoe Folio Touch, fitendry iray izay misy trackpad ary mampiditra tranga hiarovana ilay fitaovana mandritra ny dianay. Talohan'izay, Logitech dia namoaka ny Combo Touch, kitendry fitadiavana trackpad mifanaraka amin'ny iPad andiany faha-10,5, iPad Air, ary iPad Pro XNUMX-inch.
Ny endrik'ity keyboard vaovao ity dia tena mitovy amin'ilay hitantsika amin'ny maodely Combo TouchMiaraka amin'ny fonony miaro ny sisin'ny fitaovana dia mampiditra kitendry sy fijoroana ao aoriana izy mba hametrahana ny fironana izay ilaintsika amin'ny fotoana rehetra hahafahana miasa amin'ny fomba milamina kokoa, na manoratra, mamaky, manao sary na mijery atiny. Ahitana fijoroana ihany koa hitahirizana ny Apple Pencil.
Mifandray amin'ny iPad dia vita amin'ny alàlan'ny fifandraisana Smart Connector, ny fifandraisana misy eo amin'ny sehatry ny iPad Pro ihany, noho izany dia tsy ilaina ny mampandoa azy amin'ny fotoana rehetra, satria ny angovo ilaina hiasa dia azo avy amin'ny iPad, ka tsy mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny iPad, toy ny hoe nanana hanao ny kitendry ivelany rehetra izay tsy manana an'ity seranan-tsambo ity.
Rehefa tsy mampiasa ny kitendry isika dia afaka mitahiry ny kitendry any ambadiky ny iPad, mety tsy ho hita ao amin'ny Magic Keyboard. Kitendry vaovao ity Azo alaina amin'ny 159,95 euro izany ao amin'ny Apple Apple Store ary ny fandefasana, mividy azy anio, dia kasaina hatao ny 27 Jolay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Logitech's Folio Touch, kitendry misy trackpad ho an'ny iPad Pro 11-inch misy izao
Ahoana ny fanesorana ireo fifandraisana atoro anao rehefa mizara atiny ao amin'ny iOS 14
Skype ho an'ny iOS dia efa ahafahantsika manazava ny fiavian'ireo antsontsika